Naqshadeynta Dibadda ee Shiinaha ee bandhigga bandhigga iyo soosaarayaasha | Piedra
Naqshadeynta bannaanka waa runti aad u weyn oo loo hayn karo sida qurxinta bannaanka, sida qurxinta labajibbaaran, qurxinta farshaxanka iyo wixii la mid ah. Waxaa loogu talagalay qaab diirkeed, waxaa lagu miiray saameyn muraayad iyo midab dahab ah. Oo way ka duwan tahay midabka dahabiga ah ee caadiga ah, kaas oo ereygan rootiisu ay la midab tahay midabka dahabka ah si aad u aragto milicsiga hooska halkan. Laakiin midabka dahabka ah ee caadiga ah ma arki karaan hoos. Haddii farshaxanno bir ah oo bir ah ay xiiseynayaan adigu, fadlan xor ayaad noogu soo diri kartaa sales1@brandsculptures.com.
Shayga No. MES61
Faahfaahin farshaxanka dibadda
Waxyaabaha Birta birta
Cabbirka Waa la hagaajin karaa
Logo Haa, Logo wuxuu noqon karaa xardho laser, embossed / debossed ka caaryada iwm
OEM / ODM Haa, si diirran ugu soo dhowow. Fadlan noo soo dir naqshaddaada ama sawir-gacmeedkaaga ama sawir-gacmeedkaaga
Qiimaha muunad In lagu gorgortamo iyo xamuul xamuul ah
Tusaalaha muunadda rasaasta Qiyaastii 15 maalmood
Waqtiga dirida Qiyaastii 25-30days, waxay kuxirantahay tirada iyo qaabka xaalada
Isticmaalka Qurxinta guriga, hadiyadda, ururinta farshaxanka, qurxinta beerta, qurxinta deyrka, qurxinta barxadda, qurxinta muuqaalka, qurxinta xafiiska, qurxinta guryaha, iwm.
Baakadaha Xirmada xirmada Plywood
Bayaanka Sawirku waa kaliya in lagu muujiyo kartida waxsoosaarka. Waad ku kalsoonaan kartaa tayadayaga
Xulashada Xirfadda Gacan lagu sameeyay, la xardhay, sanding, safeeya ama rinjiyeynta ama Chromed dusha sare
Ku saabsan muunadaha
1. Muunado ayaynu samayn karnaa annaga, laakiin dhammaan eedayntu waa inay noqdaan qayb macmiil ah. Naqshad kastaa waxay u baahan tahay in laga sameeyo bilow ilaa bilow. Haddii aad dalbato amarka weyn, lacagta muunad ayaa laga goyn doonaa qaddarka dalabka.
2. U qorshee fikirkaaga ama sawirkaaga naqshadeeyayaasha xirfadda leh. Waad na siin kartaa fikraddaada, ama waad noo oggolaan kartaa annaga ayaa kuu naqshadeeye.
Geedi socodka farshaxanka birta casriga ah ee bilaa jilicsan:
1. Waxaan ka dhigi karnaa farsamo gacmeed gacmeed / boodh 3D ama caar caag ah waxay kuxirantahay sharaxaadaada.
2. Samee qaab biraha ah sida waafaqsan sawiradaada ama muunad yar.
3. Ku dabool taarikada birta ee birta ku jirta gudaha gudaha
4. Alxanka oo nadiifi dusha sare si ay u muraayad u ahaato
Hore: Tilmaamo Beero Casri ah oo Casri Ah
Xiga: Xusuus qoryada Beerta Abtiriskeeda ah ee Iibka
Qaabdhismeedka Qaabdhismeedka Qalabka Farshaxanka Dibadda ee M ...
Naqshadeynta Beerta Casriga ah ee Qurxinta
Sawirro waaweyn oo Birta banaanka laga duubay